China Yakasarudzika Yemhando Pepa Packaging bhokisi reRed waini yakarongedzwa neBlue EVA yekuisa vagadziri uye vatengesi Raymin
Maindasitiri Ekushandisa: Waini
Chinyorwa: 157gsm Coated bepa + 1500gsm greyboard
Feature: Kunogara, Yakakwira Hunhu
Saizi: 30 x 15 x 6cm
Ruvara: Spot ruvara Dhinda
Pamusoro Pedza: Spot UV, Matte kana Glossy Lamination, Foil Stamping, Embossing, Debossing, Goridhe kana Sirivha inopisa kutsika.
OEM Service: Hongu
Mharidzo Nguva: 2-5 mazuva
Sample Fee: 50 $, inogona kudzoserwa mushure mehuwandu hwehuwandu hwasimbiswa
Mharidzo Dhirivhari: UPS, Fedex, DHL
Order kuendesa nguva: 15-18 mazuva, zvinoenderana nehuwandu
Mitero yekubhadhara: T / T, L / C (yeakakura kukosha kurongeka), Western Union, Paypal
Izvo zvakakosha kuti usarudze bhokisi remavara iro rinotaridzika rinotaridzika uye rinoshanda. Kune akasiyana mabhokisi masitaira ayo anopiwa paRaymin Ratidza.
Kuvhara kweMagineti: Iwo magineti ekuvhara mabhokisi anoitwa muchidimbu chimwe. Aya mabhokisi anogadzirwa achishandisa yepamusoro grey bhodhi. Mabhokisi aya anowanzo gadzirwa ku cube uye rectangle chimiro uye anogona kubata akati wandei zvinhu.
Simudza-kure muvharo: Iri bhokisi rakagadzirwa kubva kuchipboard. Iwo anosimudza-kubva muvharo mabhokisi akagadzirwa nezvidimbu zviviri zvakasiyana izvo zvinotsvedza pamusoro peumwe neumwe. Kunyangwe hazvo dhizaini yekusimudza-muvharo yakajairika asi chinoita kuti ive yakasarudzika inyaya yekuti inogona kubata zvinhu zvinoverengeka uye inogona kuvezwa nenzira dzakasiyana uye saizi.
Book Style Bhokisi: iro bhuku remhando yebhokisi rakagadzirwa muchimiro chebhuku. Maitiro aya anochengetedza chinhu chacho kuti chidziviririke kuti chirege kubuda. Iri bhokisi bhokisi dhizaini rinonyanya kushandiswa sebhokisi rekuratidzira sezvo richiratidza chigadzirwa mune yechic chimiro.
Collapsible Bhokisi: Iwo anodonha akaomarara mabhokisi akagadzirwa kubva grey bhodhi. Izvi zvinowanzove nemagineti kana ribhoni rakavharwa. Maitiro, chimiro, mutengo-unoshanda, uye kuchengetera hunhu hwechimiro ndizvo zvinoita kuti zvive zvakakwana kune zvipo.
Flip Lid Bhokisi: Iwo mafiripu emabhokisi emabhokisi akajairika asi tambo, mabhureki nemagineti zvakasungirirwa mubhokisi rino rekona ndizvo zvinopa kutaridzika kwakanaka.
Slide Style Bhokisi: Maitiro aya akagadzirwa kubva kuchipboard. Iwo masiraidhi emhando yemabhokisi akafanana nemadhirowa. Iwo akakwana kune zvigadzirwa zvisina kusimba uye zvinogona kutyorwa zviri nyore. Iyo slide yemhando yemombe inopa chigadzirwa neicho chakaringana chiyero chekugona pamwe nekudzivirira kwakasimba kubva kune chero mhando yekukuvara.
Bhegi Neck Bhokisi: Pfudzi mutsipa akaomarara mabhokisi anozivikanwa nekuda kwekushanda kwavo kwakanyanya. Bhokisi rakagadzirwa nezvidimbu zviviri rimwe iri bhokisi uye rimwe racho chivharo. Iyo chivharo chakagadzirwa inzira yekuti yakadzika kupfuura bhokisi pacharo. Iri bhokisi rinopa dziviriro yepamusoro kune chigadzirwa.
Round Yakaumbwa Bhokisi: Iwo akatenderera akaumbwa mabhokisi anopa chako chigadzirwa imwe yekuwedzera yakasarudzika kubata. Mabhokisi aya ane zvidimbu zviviri rimwe riri rakasungwa bhokisi rakaumbwa nepo, rimwe racho chiri chivharo.
Yakasarudzika Kavha: Iyo yakasarudzika yekuvhara bhokisi yakafanana neyakavharwa-kure bhokisi dhizaini, zvisinei, chikuru chinangwa icho bhokisi rino rinoshanda kuratidza chigadzirwa chako mumusika. Iwo akasarudzika akavhara mabhokisi ane yakajeka hwindo pachivharo chavo chinoita kuti chigadzirwa chionekwe kune vatengi. Iwe unogona kusarudza bhokisi rinokodzera zvakanakira chako chigadzirwa kubva kwedu renji kana kugadzira chimiro iwe pachako neyedu timu yenyanzvi. Nerubatsiro rweavo vane tarenda uye vekugadzira graphic vagadziri uye edu epamberi tekinoroji tinogona kugadzira mhando yepamusoro yakagadziriswa mabhokisi akaomarara mune zvese chimiro, dhizaini uye maitiro. Raymin Ratidza inopa 10-28pt yeukobvu hwemabhokisi.
Pashure: Yakakwira mhando Lid uye Base Style yakaoma mapepa bhokisi
Zvadaro: Ribhoni yekuvhara yekuvharira chimiro chipo bhokisi remapfekero evhudzi akaiswa nesiriki jira
Ribhoni yekuvhara yekuvhara style chipo bhokisi remvere dre ...